I isimenywa Ukubuyekeza namuhla yethu - ukunwetshwa CDR, ulivula - ngesihloko ukuthi sidinga ukuvula. Abasebenzisi asetshenziselwa ukusebenza ngezimbobo amafayela e-Microsoft Office, le "isivakashi ehlangeni" kungaletha abanye enkingeni. Ekuqaleni (uze uthole uhlelo lusebenza nge lolo hlobo lwefayela), abasebenzisi abaningi wavula ifayela ngezimbobo amathuluzi Ihhovisi behluleka. Umsebenzi wethu Ufo ngokuthi "ukunwetshwa CDR» ukwenza kuyaqondakala futhi kufinyeleleke wokubuka nokuhlela. Futhi believe me, kungcono mina nawe impela force.
I ukuphakamisa ziqala ukuba anqume ukuthi yikuphi amanga phansi lezi zincwadi engaqondakali. Izinketho ngempela akuzona amaningi kakhulu. Ukunwetshwa CDR isetshenziswa ukudala Vector ihluzo. Lena ngesakhiwo nokuphathelene esetshenziswa Corel izicelo zabo. I okungenzeka kakhulu isofthiwe-umdali amafayela - KorelDrav (CorelDRAW).
I engavamile lokhu format akuyona kwedivayisi eliphezulu kakhulu nge isofthiwe third-party. Ngamanye amazwi, izinhlelo ezimbalwa kakhulu bayakwazi ukuvula lolu hlobo lwefayela.
Zingobani lezi "nabathakathi" ukuthi bayakwazi ukuhlula lo CDR ukunwetshwa? Okokuqala, it is a Uhlelo lenkampani Canadian Corel (Corel) - Unjiniyela isicelo ngokuthi CorelDRAW. Lolu uhlelo sasivumela okwandile ngokudala, ukucutshungulwa nokuhlela lezinto sokuqhafaza. Ngokunengqondo, lokhu kuyindlela elungile kakhulu - umdali isofthiwe ye format CDR oyingqayizivele bakwazi ukusebenza naye.
Uma asinawo umsebenzi ukuhlela CDR ukunwetshwa - ukulibuka kungaba olunye uhlelo kusuka Corel. Ibizwa ngokuthi Corel peinty Isitolo Pro (Isitolo Corel Paint Pro). Emva ukufaka lolu hlelo lokusebenza ku-PC yakho uzoba nokuthile ukuvula ifayela CDR.
Ulwazi kuyoba wusizo kulabo abasebenza ukusebenza CorelDRAW: Korela Onjiniyela ukuncoma ukugcina amafayela zenguqulo lesishiyagalolunye noma ngaphambili of CorelDRAW. Lokhu kuzokwenza lula ukubukela noma ukuhlanganyela kumaphrojekthi.
"Nabathakathi" ababili siye sabona. Yini okunye engingakwenza zisebenzisa ukwazi indlela ukuvula ifayela CDR? Kunezinhlobo eziningana Onjiniyela third-party, isofthiwe uvule la mafayela.
Omunye wabo - ACD Systems Canvas. Abakhiqizi kwalesi sithembiso isofthiwe kungaba "ukuhlula" le CDR ukunwetshwa. Okuwukuphela "kodwa" - ifayela kumele ezidalwe CorelDRAW akukho ephakeme kuka 8 version. indlela kokulinganisa, ungabheka ukunemba kulesi sitatimende. Kungcono ukwenza, uma kuphela ngoba, ngokungafani nokubili Corel imikhiqizo, ACD Systems Canvas kuyinto isofthiwe umkhiqizo khulula.
Enye Olwa, uyakwazi ukunwetshwa ukuvula CDR, okuthiwa i-Adobe Illustrator. Cishe lena yiyona ukukhetha ngempumelelo kakhulu ukudalwa nokucubungula ka vector izithombe. Umbonisi version 9.0 kungavula CDR anenguquko eyodwa caveat: kufanele kube CDR 10 noma ngaphambi kwalokho. Uma sicabangela izindleko software ilayisensi Adobe Illustrator nguqulo ye "setha ukubukela, evulekile noma cha," ubukeka ngokoqobo igolide.
Uma sicabanga isandiso njengoba ifayela CDR Vector ihluzo, ungakwazi ukuguqula kwenye, ifomethi kwande, ngosizo izicelo ezikhethekile (converters) noma ku-inthanethi nezinsizakalo.
Uma ungenzi design futhi kude ibhizinisi ukuphrinta, kukhona okunye ukukhetha (futhi akusiwona umgwaqo embi kakhulu): cela umngani ukuthi "ojabulisayo" wobuciko yakhe, ulithumele ngefomethi ehlukile, okuyinto ungakwazi ukuvula ejwayelekile amathuluzi yesistimu yokusebenza noma i-Microsoft Office . Lokhu aqede isidingo ukuthatha uqobo ikhanda eziyinkimbinkimbi futhi kuyabiza isofthiwe ukufakwa okwesikhathi esisodwa sisonte umbono emfushane yephrojekthi.
Kukhona kungenzeka ukuthi ukunwetshwa CDR, okuyinto udinga ukuvula, kungaba ifayela yomsindo. amafayela alalelwayo e CDR format agcinwayo uma ukopisha idrayivu kanzima okuqukethwe-CD-ROM. Abakwazi livulwe ngosizo Apple iTunes noma yimuphi omunye umdlali ngoba ukudlala audio. Kungaba iguqulwe ibe ifomethi yomsindo ezivamile cishe kunoma iyiphi Converter alalelwayo (isofthiwe ukuguqula amafayela alalelwayo).
"Izanusi", okungase ukuvula CDR, siye sibuyekezwe. Manje kwakukhona eyodwa: ukuthola ifayela ne CDR isandiso iwazi labo practice. Ngikufisela inhlahla!
Kunwetshwa lombhalo: izinhlobo kanye izici eziyinhloko yencazelo okuqondene uhlelo
Kanjani ukusebenzisa umdlalo ewindini ku-Windows
"Acyclovir" - analogue. "Acyclovir" (amaphilisi) - Izibuyekezo kuka esikhundleni
Ubuthi 3: Izidingo uhlelo kokukhululwa date
Izincwadi ngokudla: indlela donsa ngokwakho ndawonye